Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. काठमाडौंमा पाकिस्तानी मेला सुरु – Emountain TV
काठमाडौंमा पाकिस्तानी मेला सुरु
काठमाडौं, २८ भदौ । काठमाडौंमा बुधबारबाट ८ औं पाकिस्तानी मेला सुरु भएको छ । काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित ट्रेड सेन्टरमा पाकिस्तानमा निर्मित सामग्रीहरुको मेला सुरु भएको हो । मेलामा पाकिस्तानमा निर्मित छाला, हस्तकला, गरगहनालगायतका सामग्री राखिएका छन ।
एक हप्तासम्म चल्ने मेलामा पाकिस्तानका ५० भन्दा बढि प्रतिष्ठित व्यापारीहरुको स्टल राखिएको छ । मेलाको सुरुवात वाणिज्य मन्त्री मिनबहादुर विश्वकर्मा र नेपालका लागि पाकिस्तानका राजदुत मजहर जावेदले संयुक्त रुपमा गरेका हुन् ।
सो अवसरमा बोल्दै मन्त्री विश्वकर्माले मेला दुवै मुलुकबीचको जनतासँगको सम्बन्ध विस्तार गर्न उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले आर्थिक गतिविधिलाई बढवा दिएर दुवै मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा अघि बढन पनि यस्ता मेलाहरु फलदायी हुने विचार ब्यक्त गरे ।
मन्त्री विश्वकर्माले पाकिस्तानमा निर्मित छालाका सामग्रीहरुले नेपाली बजार लिएको र नेपालका हस्तकलाका सामग्रीेहरुले पाकिस्तानमा प्रभाव जमाएको सो अवसरमा स्मरण गरे । पाकिस्तानले विगत केही वर्षयता नेपालमा आफ्नो उत्पादनहरुको मेला आयोजना गर्दै आएको छ ।